Nezvedu - Beijing Topsky Akangwara Equipment Boka Co, Ltd.
BeijingTopsky Intelligent Equipment Group Co., Ltd. yakavambwa muna 2003, yakatsunga kuve inoremekedzwa yepasirese michina yekuchengetedza R & D Bhizinesi.Iyo Headquarter iri muZhongguancun Hightech Park, Jinqiao maindasitiri, Inowanikwa yakazara zviuru zvitatu zvemamirimita.
Iyo inyoresa capital ndeye 42 mamirioni RMB. Isu tine matavi matatu: TOPSKY, TBD, KYCJ nezvimwe, inyika yepamusorosoro mabhizinesi.
Midziyo yemoto, inosanganisira moto wedhiraivhu, mhute yemvura, hydraulic maturusi, hupenyu hwekutarisa uye zvichingodaro
Mapurisa & zvekushandisa zvechiuto zvinosanganisira EOD sutu, telescopic manuipulator.EOD robhoti, padyo chinyararire chibooreso zvichingodaro.
Gesi detector inosanganisira laser methane gasi leak detector, imwe gasi detector, 2 mu1 detector, 4 mu1 gasi detector zvichingodaro.
Changu kana Chemiti chirimwa chakachengetedzeka zvigadzirwa zvinosanganisira inochengetedzeka yakachengeteka dhijitari kamera, inochengetedzeka yakachengeteka dhijitari ruzha nhanho mita, inemukati yakachengeteka laser daro mita uye zvichingodaro.
Mumidziyo yemoto, maturusi, kutsvagisa hupenyu uye mapurisa & michina yemagetsi, kambani yedu ine mukana wakasiyana.
Mukuchengetedzwa kwekuchengetedzwa uye zvekushandisa zvemitemo, tiri vamwe vevagadziri vakuru.
Parizvino, chigadzirwa chedu chakatotumirwa kunze kwenyika dzinopfuura makumi maviri nematunhu akadai seAmerica, France, Australia, Italy zvichingodaro.
Kusvika ikozvino, kambani yedu ine
17 Yenyika Midziyo Midziyo Hunhu Kutariswa uye Yekuongorora Center Chitupa
103 yangu yekuchengetedza chitupa chiratidzo (MA)
9 Chemical Kuputika-Uchapupu
6 CE chitupa
45 zvitupa zvepamutemo
Topsky anoramba achivhura zvigadzirwa zvitsva padanho rinodada 30% kuwedzera gore rega. Kambani yedu inoona ichipa mutengo unonzwisisika, kuendesa nekukurumidza uye basa rakanaka resausales sekutumwa kwedu. Tinotarisira nemoyo wese kushandira pamwe nevatengi vazhinji kubva pasirese zvinoenderana nekuenzana uye kubatsirana.
Muna Chikumi 2003
Beijing Topsky yakavambwa ine yakanyoreswa capital 42 mamirioni RMB nekero inogara muHaidian District, Beijing.
Isu takatamira kuzvivakwa zvekutengesa muHaidian District ine anopfuura 100 mativi emamita
Muna Zvita 2005
Kambani yedu yakatanga kutama kubva mukutengesa kuenda kune yekugadzira kambani.
Muna Kubvumbi 2013
Yedu imwe chivakwa chitsva chekugadzira chakatanga kushandiswa.
Kuita kuti nyika ive yakachengeteka.
Kugadzirisa dambudziko rekuchengetedzwa kwechinyakare neisiri-yechinyakare tekinoroji.
Kuchengetedzwa kweruzhinji uye kuchengetedzwa kwekugadzirwa.